Kumenyezelwa ukwethula kwezinhlelo zika Masipala weZasekhaya iEmfuleni | Loxion News
AlertsNewsNews in IsiZulu 5th July 2016 admin_chesly 0
uMasipala wezasekhaya uEmfuleni usufike esikhathini lapho uzogubha ukwethulwa khona umhlahlandlela nokuma kwezezimali zikahulumeni wezasekhaya okuthiwa phecelezi (State of the Municipality Address). Lesi sethulo siyokwethulwa... 0.5
uMasipala wezasekhaya uEmfuleni usufike esikhathini lapho uzogubha ukwethulwa khona umhlahlandlela nokuma kwezezimali zikahulumeni wezasekhaya okuthiwa phecelezi (State of the Municipality Address). Lesi sethulo siyokwethulwa emcimbini omkhulu ozobe ubanjelwe khona lapha eEmfuleni yikhansela Elikhulu eliwu Ndunankulu ka Masipala Umnumzane uSimon Mofokeng. uMnumzane uMofokeng uzobe ethula konke mayela nezinhlelo zezimali nezokuma kwesizinda zawona lonyaka ka 2016. Lokhu kuyokwenzeka ngaphansi kwesiqubulo esithi ‘Senza Kahle Izinhlelo zethu Zokubuyiswa Kobuntu’ okuwukuthi phecelezi “Getting the Basics Right Our Programme for restoration”.
Okunye okuyokwethulwa kulomcimbi kuyizinhlelo zekusasa lesizinda sase Emfuleni mayelana nokusebenzela imiphakathi yase Emfuleni. Konke lokhu kuyokwethulwa ngosuku lwamashumi amathathu nanye kuyona lenyanga okuyi 31st May 2016 e Ruster Vaal Stadium.